Wasiir Goodax “Puntland Imtixaanka hagasho ama haisku filnaato oo yeysan Shahaado noo soo raadsan” – Hornafrik Media Network
Wasiir Goodax “Puntland Imtixaanka hagasho ama haisku filnaato oo yeysan Shahaado noo soo raadsan”
Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in aan weli xal loo helin khilaafkii ka taagnaa imtixaankii shahaadiga ee Dugsiga Sare ee dalka, kaas oo u dhaxeeyay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka Puntland.
Wasiir Goodax oo wareysi siiyay Telefishinka BBC Somali ayaa sheegay in Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda dhexe ay weli ku kala aragti duwan yihiin imtixaanka, isagoo xusay in aanay macquul aheyn inay helaan Shahaado aysan shaqeysan.
“Puntland aragtidooda waxa waaye Imtixaanka annagaa qaadeyno, Wasaaradda Waxbarashada oo Imtixaanka agaasinto ma rabno in aan wax la wadaagno in macluumaadka ardayga u sheegno, anaga agaasimeena, kaliya wasaaradda waxbarashada shahaadada ha siiyaan, anagana waxaa niri arrintaas macquul ma ahan, inay ayaga is maamulaan anagana aan shahaado bixino oo aysan shaqeysan cadaalad ma ahan “ayuu yiri Wasiir Goodax.
Waxaa uu sheegay in wax badan ay isla soo mareen Puntland arrimaha ku saabsan imtixaanaadka, isagoo tilmaamay in xataa ay ujeediyeen inay iyaga Imtixaanka agaasimaan, isla markaana Wasaaradda Waxbarashada ay noqoto kormeerayaal, taasna ay diideen.
“Puntland waa in ay imtixaanka galaan ama aysan shahaado soo raadsan oo ay isku filnaadaan”ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka Cabdullaahi Goodax.
Maxuu Madaxweyne Dani kala hadlay wakiilka IGAD ee Soomaaliya?
Dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhashay dhul-gariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Turkiga